XOG+SAWIRO: 51-ka Xildhibaan ee Jubba Land oo ku kala qeybsan loolanka siyaasadeed ee ka bilowday Kismaayo, runtana ka sheegay cida ay la safan yihiin.. - iftineducation.com
XOG+SAWIRO: 51-ka Xildhibaan ee Jubba Land oo ku kala qeybsan loolanka siyaasadeed ee ka bilowday Kismaayo, runtana ka sheegay cida ay la safan yihiin..
iftineducation.com – Loolanka adag ee Kismaayo ka taagan waxaa loogu jiraa 51-ka xildhibaan ee isugu jira aqalka sare iyo midka hoose oo igagu iyo kuwa dhigooda hadii la isku daro ka go’ado cida la wareegeysa hogaanka ugu sareeya dalka.
Inkastoo C/raxmaan C/shakuur loolankiisa siyaasadeed uu ka fudud yahay marka loo eegi Cumar C/rashiid iyo Xasan Sheikh iyo saameynta ay ku dhex leeyihiin Baarlamaanka Labada Aqal ee ka imaanaya Jubba Land ayaa hadana waxaa la soo sheegayaa in xubnaha Baarlamaanka ay ku kala qeybsan yihiin.
Xildhibaan Axmed Xaashi Maxamed oo isagoo Kismaayo ku sugan la hadlay Shabakada Warqaad.com ayaa sheegay iney soo dhaweynayaan dhamaan aragtida musharaxiinta dalka gaar ahaan musharaxiintii ugu danbeysay soo booqday Kismaayo soona una soo bandhigay musharaxnimadooda iyo hamiga ay leeyihiin.
Wuxuu sheegay Xildhibaan Abshir in Kismaayo ay isku arkeen Xasan Sheikh Maxamuud oo si gaar ah hadal kooban u dhexmaray,isagoo hadalkiisa ka dhadhansanayay inuu helo taageerada badi xildhibaanada Labada aqal ee ka imaanaya Jubba Land.
Isagoo guuxa Xildhibaanada iyo rabitaankooda ka hadlayay ayuu sheegay in kala bar ay taageersan yihiin musharaxnimada Cumar C/rashiid Cali Sharmarke inkastoo uu sheegay jiritaanka xildhibaano tira kooban oo la dhacsan musharaxiinta kale.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh kulumo guud iyo kuwa gaar gaar ah ka wada Kismaayo tan iyo xalay,isagoo la kulmaya Waxgaradka,xildhibaanada iyo madaxda maamulka Jubba Land.
Socdaalka Kismaayo ayaa ku kala fogaaday Xasan Sheikh Maxamuud iyo Cumar C/rashiid oo hawada isku mariyay hadalo kul kulul, waxaana Xasan Sheikh uu caro ka muujiyay hadal uu Kismaayo ka sheegay Cumar C/rashiid.
Muqdisho oo lagu soo kordhiyay dhismooyin qurux badan: SAWIRRO
Sacuudiga oo Jabuuti ka furanaya saldhig millatari